Mpitondra… olana… mankany mankany… | NewsMada
Mpitondra… olana… mankany mankany…
Par Taratra sur 20/01/2017
Tsy misy ny mpanohitra hoe ara-dalàna eny anivon’ny Antenimiera, tsy misy firy ny sahy midina an-dalambe na mamory vahoaka ankalamanjana, darohin’ny herim-pamoretana avy hatrany izay soketaina sy ahina ho manakorontana sy manongam-panjakana…
Amin’izany, mihevitra ny mpitondra fa mandeha tsara ny raharaham-pirenena, misy ny fitoniana politika, azo antoka ny fahamarinan-toerana… Matanjaka ny mpitondra sy ny antokony? Tsy misy mikofoka ny rehetra, tsy firy ny sahy miteny sy mitsikera.
Na miteny aza, tsy misy mpihaino. Eny, himenomenona eo aza… Toy izany io tsy fivahan’ny delestazy io efa mandavantaona sy mihamahery vaika. Tsy mahavaha olana ny mpitondra. Mahita fialana hatrany: tsy fahampian’ny solika, tsy fisian’ny ranonorana…
Odian-tsy hita na iniana anaovana bemarenina amin’izay olana sy mitranga rehetra? Tsy fandriampahalemana, delestazy, haintany, tsy fanjarian-tsakafo, fidangan’ny vidim-piainana, fitsaram-bahoaka… Tsy hita izay hatao sy lazaina amin’izany.
Amin’izany rehetra izany, mihevitra ny mpitondra fa mandeha ihany ny raharaham-pirenena. Tsy misy mahavita ny vitany? Tsy vitan’izay, mandeha sy voafehy ny politika: hainy, vitany. Ataony ihany ny ataony na iza tsy faly, na iza hiteny, na inona tenenina.
Izany tokoa ve ny hoe fitantanan-draharaham-panjakana sy politika hoe vita sy hay? Rehefa manjaka tsy tohinina ny tena, dia izay: tsy mba diso, manao izay saim-pantatra, tsy rafesi-mandidy, tsy azo ahitsy, tsy mihaino… Tsy inona izay vahoaka sy firenena.
Hampandroso ny firenena sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka ny antom-pisian’ny fitondrana, napetraky ny vahoaka ho amin’izany. Tsy vitan’ny fitanana sy fitantanana fitondrana fotsiny. Izay no tsy mampitovy ny olom-panjakana sy ny olom-pahefana.
Olom-panjakana mijery izay tena tombontsoam-pirenena ny mpitondra amin’izao sa olom-pahefana mionona amin’ny fitanana sy fitantanana fahefana fotsiny? Lasa mitondra olana ny ny raharaha, mankany mankany… Ho tonga hatraiza?